ညှိနှိုင်းမှုပြproblemsနာများကို Mi Band2ဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်း။ Androidsis
ညှိနှိုင်းမှုပြproblemsနာများကို Mi Band2နှင့်ဖြေရှင်းခြင်း
Francisco Ruiz | | လဲ tutorial, Xiaomi က
အကယ်၍ သင်သည် Xiaomi Mi Band2လက်ကောက်လက်ကိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး Mi Band2နှင့်သင်၏ Android terminal အကြားထပ်တူပြုခြင်းပြproblemsနာများရှိသည်ဟုရုတ်တရက်သင်မြင်တွေ့ရပါကဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ငါဒီမှာရှင်းပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်နာပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာမင်းရလိမ့်မယ် Xiaomi Mi Band2နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပါ.
ထို့နောက်ဆိတ်ကွယ်ရာမှ သုံးစွဲသူများစွာစိတ်ပျက်အားလျော့စေသောဤပြproblemနာကိုသင့်အားအဖြေပေးသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလက်ကောက်၏အကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ယခုကျွန်ုပ်တို့ရရှိလာသောကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်နှင့်တောက်ပသော Android terminal အသစ်တွင် Mi Band2ကိုအသုံးမပြုနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောပြwhyနာများမှအဘယ်ကြောင့်ခံစားနေရသည်ကိုရှင်းပြသွားပါမည်။
1 အဆိုပါ firmware ကိုအတွက်ချို့ယွင်းချက်သို့မဟုတ်ဟာ့ဒ်ဝဲချို့ယွင်း?
2 Mi Band2၏တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနည်း
2.1 Google Play Store မှ Mi Band2ကိုအခမဲ့ download ရယူပါ
2.2 Google Play Store မှ Mi Band Free အတွက် Notify & Fitness ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
3 Xiaomi Mi Band2၏ထပ်တူပြုခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ခြေလှမ်းများ
အဆိုပါ firmware ကိုအတွက်ချို့ယွင်းချက်သို့မဟုတ်ဟာ့ဒ်ဝဲချို့ယွင်း?
ရုတ်တရက်ဒီနှောင့်အယှက်ကြုံတွေ့သူနှင့်အဘို့ Xiaomi Mi Band2၏ငြီးငွေ့ဖွယ်ထပ်တူပြုခြင်းပြproblemနာသင်သိထားသင့်သည်မှာမူ၎င်းသည် Xiaomi နှင့်တရားဝင်အထောက်အပံ့ဖိုရမ်များကိုအချိန်အတော်ကြာတင်ပြခဲ့သည့် firmware အမှားကြောင့်ဖြစ်သည်၊ အနည်းဆုံးအားဖြင့်အဖြေတစ်ခုသို့မဟုတ်တုန့်ပြန်မှုမရရှိသေးသည့်အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီ။
ပြBandနာက Mi Band2ကိုတရားဝင် Xiaomi application ဖြစ်တဲ့ Mi Fit application မှတဆင့် Android device တစ်ခုနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်း device ကို default အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ Mi Band2ကိုအခြား Android device နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ.
အရင်ကတရားဝင် Xiaomi Mi Fit application ကနေလက်ကောက်ကိုပြန်ပြီးရရင်တောင်၊ အသစ်စက်စက်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်ပိုမိုစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများအတွက်စက်ရုံပြန်လည်တည်ဆောက်မှုပြုလုပ်ပါက၎င်းသည်ယခင်ကချိတ်ဆက်ခဲ့သောစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်မပြုပါ။
တရုတ်နိုင်ငံ၏မြို့ရိုးကြီး၏နိုင်ငံပေါင်းစုံမှနိုင်ငံတကာမှတုန့်ပြန်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့်ဤမျှကြာမြင့်စွာအချိန်ယူရသည်ဟူသောအချက်ကလူအများစုကရိုးရှင်းသော firmware ပြproblemနာတစ်ခုထက်ပိုသောအရာများရှိသည်ဟုထင်မြင်စေသည်။ မဟုတ်ရင်ကျနော်တို့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေကတည်းကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထွက်အုပ်ချုပ် Xiaomi Mi Band2၏ထပ်တူပြုခြင်းပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပါ ဒီ post ထဲမှာ Xiaomi မဟုတ်တဲ့ applications တွေထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုတင်ပြနိူင်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အကြံဥာဏ်များနဲ့အတူ။
Mi Band2၏တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနည်း
Xiaomi Mi Band2၏ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောထပ်တူပြုခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာမှာ တရားဝင် Xiaomi Mi fit app ကိုဖယ်ထုတ်ပါ, Google Play စတိုးကိုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤလိုင်းများအောက်တွင်သာထားခဲ့သည့်ဤအက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုကိုကူးယူရန်ပြေးပါ
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မည့်လျှောက်လွှာနှစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုမည့်အရာများဖြစ်သည် Xiaomi Mi Band2တွင်တွဲဆက်ခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပါ၎င်းတို့သည် OneZeroBits မှတီထွင်ထားသော application နှစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Xiaomi အပြင်ဘက်ရှိ developer များသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုလက်ကောက်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုသူတို့မပြုလုပ်မီဖြေရှင်းချက်ကိုရှာတွေ့ခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။
Google Play Store မှ Mi Band2ကိုအခမဲ့ download ရယူပါ
Mi-Band2အတွက် Fix-it
Google Play Store မှ Mi Band Free အတွက် Notify & Fitness ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
အသိပေးချက် & Mi Band များအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေး
Xiaomi Mi Band2၏ထပ်တူပြုခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ခြေလှမ်းများ
ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရမည့်ပထမ ဦး ဆုံးအချက်မှာလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတရားဝင် Xiaomi Mi Fit အက်ပလီကေးရှင်းကိုအပြည့်အ ၀ ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့် application နှစ်ခုဖြစ်သော Mi Band2application နှင့် Not Band & Mi Band application ကို install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Xiaomi Mi Band2၏ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ Fix for Mi Band2application ကိုဖွင့်ပါ။ Search ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Connect & Pair or Connect နှင့် synchronize ပြောသောခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။.
ပြီးရင် Connect ကိုနှိပ်ပြီး synchronize လုပ်ပါ Xiaomi Mi Band2လက်ကောက်ပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ထပ်တူပြုခြင်းကိုအတည်ပြုပါဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့တုန်ခါမှုကိုသတိပြုမိပြီးဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ခလုတ်ကိုနှိပ်ရမည်ဟုပြောသောအခါဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယအဆင့်ကိုသာလုပ်ဆောင်ရန်လိုသည် Open Notify App ပြောသောခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, ဒုတိယတပ်ဆင်ထားသည့် application ကိုခေါ်ဝေါ်သောခလုတ်၊ Mi Band application ၏ Notify & Fitness for, ယခု မှစ၍ Xiaomi မှတရားဝင်ဆက်သွယ်မှုပြေလည်သွားသည်အထိ Mi Fit application မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံတင်ပြသောလျှောက်လွှာ၊ Xiaomi Mi Band2လက်ကောက်နှင့်အတူဒေတာအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ညှိနှိုင်းမှုပြproblemsနာများကို Mi Band2နှင့်ဖြေရှင်းခြင်း
ဗစ်တာ valdiviezo ဟုသူကပြောသည်
Victor Valdiviezo အားပြန်ပြောပါ
Naomi Galiano ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်မရှင်းပြနိုင်သည့်ရှင်းလင်းချက်များရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏တီးဝိုင်း ၂ ရှိ Mac လိပ်စာကိုတောင်း။ ၎င်းကိုမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ယူရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Naomi Galiano သို့ပြန်သွားပါ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ဖုန်းပြောင်းလိုက်လျှင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ယခင်နှင့်အခြားချိတ်ဆက်ထားပါကကျွန်ုပ်တီးဝိုင်း ၂ အားဤ terminal အသစ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ။
ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ band app အတွက် fix-it နှင့်လည်းမဆက်သွယ်ပါ။ တယ်လီဖုန်းဆက်တင်များကိုသင်ပြုပြင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ် ၂ ခုနှင့်အတူမိုဘိုင်း ၂ လုံးပါသောစမတ်နာရီ ၂ ခုတွင်ဖြစ်ပျက်သော်လည်း၊ မည်သည့်နေရာတွင်အကြံပေးမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Hector Manuel ဟုသူကပြောသည်
သင်အကြံပြုသောအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်သင်၏ရေးသားချက်တွင်ရှင်းလင်းချက်နှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှင်းပြမှုတို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏တီးဝိုင်း ၂ သည်ပြန်လည်ရှင်သန်လာခဲ့သည်။ ဒီအမျိုးအစားပံ့ပိုးမှုများကိုတန်ဖိုးထားကြသည်။ ။ ။ မက္ကစီကိုကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သည်
Hector Manuel အားပြန်ပြောပါ
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်တရားဝင် application အတွက် update နှင့် Mi Band အတွက် firmware update ကိုရရှိခဲ့သော်လည်းကံမကောင်းအပြီးတွင်တော့၎င်း application များကို sync လုပ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
မင်္ဂလာပါ။ Xiaomi mi band2လက်ကောက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မိုဘိုင်း application မှပထမဆုံးဝယ်ယူခဲ့သည်မှာမှားပါသည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုပြည်ပမှ Xiaomi မှစပိန်သို့ပို့ခဲ့သောကြောင့်သူတို့မသိရှိပါ။ ပြaနာတစ်ခု
မိုဘိုင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ရက်ခွဲခွဲကြာသော်လည်းလက်ကောက်ကိုထိအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ချိတ်ဆက်ရန်စီမံနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် Xiaomi Mi Fit အက်ပလီကေးရှင်းကိုလုံလောက်သည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာကိုထည့်ပြီးမှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့၊ လက်ကောက်ကိုအမြင့်ဆုံးအားသွင်းပြီးရင်ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီး activate လုပ်ပါ။ ပြီးတော့လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ရော၊ အပလီကေးရှင်းပါပါဆက်သွယ်မှုကိုစမ်းကြည့်ပါ။ လက်ကောက်ချိတ်ထားတယ်၊ အဲဒါဟာလက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေမှာဖြစ်တယ်။
ငါထင်တဲ့ပြproblemနာကဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ကောက်ရဲ့ firmware ကမွမ်းမံလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့်သူနဲ့ချိတ်လိုက်ရင်စိတ်မပူပါနဲ့သူ့ဟာသူမွမ်းမံလိမ့်မယ်။
ငါဆောင်းပါး၌ရှင်းပြသည်အဆင့်အားလုံးကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်သူကအလုပ်မလုပ်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ တရားဝင်ဖုန်း Mi ထဲကတရားဝင် MiFit application ကိုငါဖျက်လိုက်တယ်၊ ပထမဆုံး install လုပ်လိုက်တယ်။ ငါတရားဝင် app ကိုဖျက်လိုက်ပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်ရှာတဲ့အခါငါရဲ့လက်ကောက်ကတုန်ခါနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါမှန်မှန်ကန်ကန်နှိပ်မိလိုက်တာ၊ ငါကမိုဘိုင်းကိုအသိအမှတ်မပြုဘူး၊ ဒါကြောင့်၊ သူဟာတွဲဖက်မထားဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများဖြင့်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုမသိပါ !!!! လက်ကောက်သည်လအနည်းငယ်သာရှိသေးပြီးယခုကျွန်ုပ်မသုံးနိုင်ပါ၊ မည်သည့်အရာနှင့်မှထပ်တူမကျပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ
ကျွန်ုပ်တွင်ဖုန်းရှိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာ bluhtoom မှတဆင့်ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်သောအခြားကိရိယာများအားလုံးသည်ထိန်းချုပ်မှုမှလွတ်မြောက်ပြီး bluhtoom ခေါ်ဆိုမှုကိုကျွန်ုပ်မခေါ်နိုင်ပါ။
Marta GARCIA DIAZ ဟုသူကပြောသည်
MARTA GARCIA DIAZ သို့စာပြန်ပါ
ငါကအခြားကိရိယာများနှင့်အတူကကြိုးစားခဲ့ကြပြီးချိတ်ဆက်မထားဘူး။ Mi Band2အတွက် BLE နှင့် Fix-it နှစ်ခုစလုံးသည်လက်ကောက်ကိုတွေ့ရှိကြသော်လည်း၎င်းကိုတွဲထားသည့်အချိန်တွင်အမှားတစ်ခုပေါ်လာသည်။
ငါ bluethood cache ကိုရှင်းလင်းခဲ့ပြီးအခြားဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ လက်ကောက်သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည် (အဆင့်များ၊ သွေးကြောများတွက်ချက်သည် ... )၊ သို့သော်ချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။
Hannibal Julio Napolitano ဟုသူကပြောသည်
Anibal Julio Napolitano အားစာပြန်ပါ
Asus Zenfone4ကိုဇူလိုင်လအကုန်တွင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်
WannaCry ransomware သည် Android အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်